Andikho a club-goer kwaye mna bakhetha ukwenza nantoni na ongomnye kwe-yiya kwi-indoda yempumlo bar okanye gay club apho uziva ngathi kufuneka ujonge okanye umthetho othile indlela. Mna anayithathela zange waziva ethambileyo okanye efana mna basenokuba ngokwam oko kukuthi kutheni ndiqonda wena amawaka ezinye gay abantu ngathi kuthi musa njenge ekubeni”icandelo lomboniso.”Ekubeni epheleleyo usebenzisa ikhompyutha ukuba ukhe ubene hayi kwi-gay icandelo lomboniso yeyona a enkulu inyathelo lesi-ukuthatha kwaye ndiza apha emandikuxelele yona, wamkelekile lokwenene omnye umntu. Wam uluvo lwam, ke solo kakhulu ngcono apha. Uninzi kuthi resort ukuba dating apps njenge Grindr, Scruff, Uxakekile okanye Manhunt, bonke kunye hopes ka-ukuqhagamshela kunye zethu zasekuhlaleni okanye kwintlanganiso uthando lwethu ubomi. Njengathi gay uncwadi, le yindlela ukuhlangana namanye gay abantu kodwa ke, hayi kuphela indlela. Ezi apps ngokuqhelekileyo ukutsala guys nje ukujonga hook phezulu. Ezi apps kusenokuba kuluntu kwezabo indalo, kodwa banako shiya kuwe ndinovelwano asivunywanga kwaye lonely ingakumbi xa hookup okanye encounter akuthethi ukuba baguqukele kwi kubalulekile friendship. Ngaba ngokwenene akunayo ukwenza abahlobo kwi-gay kuluntu ukuze bazive uzalisekisiwe kwaye uvuma. Akunyanzelekanga ukuba ndiye nightclubs okanye ukwenza dating inkangeleko xa nisolko ndinovelwano lonely, okruqukileyo okanye horny. Akunyanzelekanga ukuba ubeke ngokwakho kwi-environments ukuba enze uziva uncomfortable. Ukuba ufuna ntoni, ngoko oyenzayo ngokwakho i-disservice kwaye ebangela kwenzakala kwiintlanganiso yakho mental hygiene leyo yindlela nigcina engqondweni yakho kwaye yakho emotions coca kwaye spiffy. Njengathi sidinga ukuba uhlale hygienic kunye zethu yesitalato imizimba yi-brushing zethu amazinyo, ethabatha ikhephu kwaye isebenzisa igunya, ke ngokulinganayo njengoko kubalulekile ukuba indawo ngokwethu kwi-isempilweni environments ukuba inkxaso yethu ulonwabo kunye namaqonga kulungile-ntle. Ukuze ukwazi ukwenza abahlobo ngaphandle gay icandelo lomboniso, onalo ukuphendula le omnye umbuzo:”Yintoni yakho amaxabiso.”Ingaba ixabiso lezempilo.
Ingaba zinika ixabiso emva ukuba uluntu nge-volunteerism okanye entrepreneurship. Xa ufuna ukuchonga yakho amaxabiso, ngoko uyakwazi ukukhetha kwaye khetha uluntu ukuba yenza neqabane lakho amaxabiso. Kukho plenty imisebenzi eyenziwa emsebenzini ukuze yenza neqabane lakho amaxabiso yakho entsha isixeko njenge hiking, yoga, ividiyo umdlalo uncwadi, incwadi uncwadi, unguye studios, iisemina e wobulali colleges kwaye iyunivesithi. Ke ezi ndawo kwaye izehlo ukuba yenza neqabane lakho amaxabiso sele onayo ukuba abe yakho inani elinye ukubaluleka ngoba apho kufuneka futhi ke kuhlangana abantu nje ngathi wena, kungakhathaliseki nokuba ngaba okanye hayi abo. gay okanye ngqo, indoda okanye ibhinqa. I-kaninzi ubonisa phezulu (amagama angundoqo nazi”bonisa phezulu”), uza begin ukuba badibane nabantu abo yenza neqabane lakho amaxabiso. Njengoko kufuneka ahlangane kwaye baxubane kunye aba bantu, ndifuna ukuba baba proactive ekwenzeni ezi zintathu izinto: kunokuthi ukuva awkward ukuba angenise ngokwakho ukuba abantu abatsha, kodwa kufuneka nje onayo ukuze suck kuya phezulu kwaye baqonde ukuba abanye abantu bamele oza kuba abahlobo bakho nabanye aren khange. Mna funeka uxelele wam abafundi, abanye baya, abanye uphumelele khange, ngoko ke ngubani, umntu ke ukulinda.
Qiniseka ukuba nikhumbule okokuba
Tshintsha ifowuni amanani okanye exchange iidilesi ze-imeyili. Ndiza recommend wena musa siqale loluntu media apha ngoba ngoko ke, kulula ukufumana ezilahlekileyo kwi-lwezempilo, kwaye nje kuba cog kothile okanye ke loluntu media ivili ka-asigwebele. Lonke ixesha xa kuhlangana umntu uyafuna, mema kwabo ngaphandle ukuba ikofu okanye mema kwabo ngaphandle i-non-umsebenzi-enxulumene umsebenzi. Ngoko ke, xa kufuneka, ubuncinane – entsha abahlobo ukuba ufuna anayithathela dibeneyoname kunye, uyakwazi mema zonke kubo phezu endlwini yakho kuba sangokuhlwa iqela okanye isicwangciso iqela outing kunye. Ke yakho uxanduva ukuthatha phulo ukwenza entsha abahlobo kunye nendlela entsha loluntu amaqela, ingakumbi xa ufuna ukushenxisa elitsha kwisixeko. Akukho namnye ongomnye ngu-oza kukwenza oku kuwe, kodwa ngoku kuwe kuba kanye amanyathelo ukuba bathabathe get iqela guy abahlobo kunye, kwaye kanjalo sazi njani ukuba ahlangane umgangatho gay guys ngaphandle gay icandelo lomboniso. Ufuna ngakumbi iincam ukwenza abahlobo baze babe ndonwabe. Hlasi wam FREE Mna-ukwamkeleka uluhlu lokukhangela ukuba kubonisa njani ukwenza ubomi ukuba usoloko babefuna
← NGE - KUHLANGANA, INCOKO, INCOKO
Ethandwa kakhulu Mexico Dating, ezinzima Dating Mexico →